ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေး
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ယနေ့ ညနေ ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ၊ Chatrium Hotel ၌ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြောကြားရာတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၊ ကမ္ဘာခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ ပါကြောင်း၊ အာရှလူမျိုးခရီးသွား ဈေး ကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဗီဇာဖြေလျှော့မှုများကိုသက်ဆိုင် သည့် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများလည်း ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုထပ်မံပြီး အနောက်ဥရောပမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များပိုမိုလာရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အေးချမ်းသာယာသည့် ပကတိအခြေအနေကို ပြသ နိုင်ရန်အတွက်လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ အနောက်ဥရောပခရီးသွား ဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးကြစေလိုပါကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သင့်သည် များကို ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဦးရန်ဝင်းနှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ မြန်မာနိုင်ငံရာနှုန်းပြည့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှပ်နှံအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
နေပြည်တော်၊ဖေဖော်ဝါရီ (၄) ရက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မိုးကုတ်မြို့သို့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မန္တလေး-မတ္တရာ-စဉ့်ကူ-သပိတ်ကျင်း-မိုးကုတ်ခရီးစဉ်အတိုင်း သွားလာကြရန်နှင့်လှည့်ပတ်သွားလာမှုကို မြို့တွင်း မြို့ပေါ်တွင်သာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များအား မိုးကုတ်မြို့၏ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ခွင့်ပြု ထားသည့်မြို့တွင်းမြို့ပေါ်အပြင် ကျောက်ပြသာဒ်၊ပန်လင်-ဘားနဒ်ကျေးရွာများသို့ ခရီးစဉ်တိုးမြှင့်လည်ပတ် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
World Luxury Cruise Visits Ngapali Beach
As Ministry of Hotels and Tourism is taking efforts to develop hotel and tourism sector and to ensure that international tourists travel safely and conveniently, domestic and international tourists come and visit by their own motor cars, by boats and by cruises via border gateway , waterway and airway to enjoy natural beauty, traditional customs and culture of ethnic people in Myanmar.
With the arrangement of Destination Asia Co;Ltd and the supervision of Ministry of Hotels and Tourism, Ms Silver Discoverer Luxury Cruise which carries (61) international tourists arrived Ngapali Beach in the morning of February 1,2019 and visited pagodas in Thandwe, Myoma Market and set off Yangon at night. Afterward, they will depart from Yangon International Airport in February 5, 2019.
In this luxury cruise, (2) Australians, (2)Canadians, (1)French, (1) Netherland, (2)British and (53)Americans, totally (61)tourists accompanied during the trip.